Dowlada Federalka oo ka hadashay cillad ka jirta qadka Internetka Koofurta Soomaaliya - Home somali news leader
Home NEWS Dowlada Federalka oo ka hadashay cillad ka jirta qadka Internetka Koofurta Soomaaliya
Dowlada Federalka oo ka hadashay cillad ka jirta qadka Internetka Koofurta Soomaaliya
Sii hayaha Wasiirka Wasaaradda Boostada iyo Isgaarsiinta Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Eng. Cabdi Canshuur Xasan ayaa ka hadlay cillad ku timid qadka internetka ee Koofurta Soomaaliya.
“Iyada oo laga jawaabayo baaqii dowladda ee ahaa in dalku yeesho xargo badan oo Internetka soo geliya dalka, ayaa waxa aan ugu bishaaraynaynaa dadweynaha Soomaaliyeed in uu shaqo bilaabay Khadka Xarrigga Internetka ee DARE1 (Djibouti Africa Regional Express 1) oo noqonaya xarriggii labaad ee Internet ee magaaladda Muqdisho ka howlgala; Xarriggan cusub ayaa waxa aan rajaynaynaa in uu xoojin fiican u noqon doono xariggii hore ee Internet ee ka shaqeynayey magaalada.”ayuu ku yiri wasiirka boostada qoraal uu soo saaray.
Sii hayaha Wasiirka Boostada Isgaarsiinta & Tiknolojiyadda Xukuumadda si gaar ah uga mahadceliyay Shirkadda SOMTEL oo si deg-deg uga jawaabtey baaq horey uga soo baxay dowladda Federaalka ee ahaa helitaanka xarrigga labbaad Internet-ka Muqdisho.
Previous articleAfar ruux oo loo xirey dil xalay ka dhacay magaalada Paris
Next articleMaxkamada Hargeysa oo xukun ku ridey rag lagu eedeeyay kufsi